Rikoooo.com - Nanome anay fitaterana supersonic ny The Concorde
Nanome antsika ny Concorde supersonic fitaterana
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Colonelwing » 26 feb 2017, 01:40
Mety hiampita ny Atlantika ity fiaramanidina ity afaka 3.5 ora. Fa maninona no tsy nahomby?
Ny Concorde dia nanome anay fitaterana supersonic. Fa maninona no tsy nahomby ity fiaramanidina supersonic ity?
Sarotra ny valiny - nanadihady i Phil Edwards an'i Vox.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Dariussssss » 26 feb 2017, 10:49
Ny tena antony dia ny taonan'ny fiaramanidina fotsiny. 30+ taona, miaraka amin'ny fandoroana solika goavana. Tena marefo sy marefo. Tsy mety amin'ny fitsangatsanganana an-habakabaka ankehitriny, rehefa miasa mafy ny fiaramanidina hitondra vola any amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Mpankafy Concorde goavambe aho, saingy, niandry fotsiny ny zava-nitranga tany Paris.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 27 feb 2017, 03:32
Dariussssss nanoratra hoe: Ny tena antony dia ny taonan'ny fiaramanidina fotsiny. 30+ taona, miaraka amin'ny fandoroana solika goavana. Tena marefo sy marefo. Tsy mety amin'ny fitsangatsanganana an-habakabaka ankehitriny, rehefa miasa mafy ny fiaramanidina hitondra vola any amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Mpankafy Concorde goavambe aho, saingy, niandry fotsiny ny zava-nitranga tany Paris.
Mampalahelo fa tsy maintsy manaiky aho ...
Mampihomehy, manao dia eran'izao tontolo izao aho izao any Concorde. Tsy fantatrao hoe firy ny tongotra horaisin'ity na aiza no hitondrany ahy, fa ho hitantsika eo
Handefa ny drafitra fiaramanidiko amin'ny kofehy vaovao aho rehefa vita
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Colonelwing » 27 feb 2017, 18:15
Ankafizo ny fitsangantsanganana Gentelmen!
British Airways Concorde - Fitsidihana Cockpit amin'ny antsipirihany -
Concorde, fiaramanidina tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Mandrosoa ao anatin'ny G-BOAC, ilay sainam-pirenen'i BA's Concorde, ary mankafy fitsidihana amin'ny antsipirihany ny cockpit tsara indrindra an'ny analogue an'ny fiaramanidina. Dingana iray mankany aloha amin'ny seranam-piaramanidina Manchester.
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Gh0stRider203 » 02 Mar 2017, 05:41
azafady raha mbola manova ny boxer-ko aho .....
btw, nizara ny vid aho tao amin'ny Facebook-ny manokana, ary noho izaho malemy paika dia nomeko voninahitra ianao, Kolonely MISAOTRA ANAO! noho ny fandefasana ny vid!
Lahatsoratra tsy mbola novakiana by Colonelwing » 03 Mar 2017, 01:54
Amin'ny fotoana rehetra ny vadiny!